Izinhlelo Zokusebenza ezi-5 eziphezulu zeSelula Photography - LucidPix
Izinhlelo ezi-5 eziphezulu kakhulu Zezithombe Zeselula
Ngabe udinga ezinye izinhlelo zokusebenza ukukusiza uguqule ukubukeka kwesithombe sakho? Sikhethe izinhlelo zethu zokusebenza eziphezulu ze-5 ze-Photograph's Photograph zika-2020 kuze kube manje! Qhubeka ufunda ukuze ubone kahle ukuthi ungasiphakamisa kanjani futhi uthuthukise isithombe sakho.
Intandokazi yenkolo, Boomerang ngu-Instagram ihlose ukwenza "izikhathi zansuku zonke zibe mnandi futhi zingalindelekile". Uhlelo lokusebenza lwakha umphumela "we-boomerang" ngokuthatha izithombe ezimfushane kakhulu bese luzisula zilunguze ndawonye ukudala ividiyo eyodwa ehambisanayo. Ungayifinyelela nge-App Store (etholakala ku-Android ne-iPhone) noma ungayisebenzisa ngqo ku-Instagram. I-Boomerang yisisombululo esheshayo futhi esilula sokwenza izithombe zakho zihlukile kepha isetshenziswa kakhulu ngabantu abaningi, ngakho-ke ungafuna ukukhetha uhlelo lokusebenza oluhlukile ngokwengeziwe! Njengoba kungekho zici ezingeziwe ezingezwe kusibuyekezo sohlelo lokusebenza, kulula kakhulu ukusebenzisa nokuqonda.
Thola ukulungele ukuhlehlela emuva kuma-90 ngalolu hlelo lokusebenza lwekhamera olungenanjongo! ""HUJI Cam yenza izikhathi zakho zenane njengemizwa yefilimu ye-analog enezinkumbulo ezindala. ” Uhlelo lokusebenza lufeza lo mphumela ngokumbathiswa okuningana esithombeni (ngesinye isikhathi kusenza sibe buthaka njengoba kungabonakala ngezansi ukusinika umphumela "osekhulile"). Ungaguqula futhi izithombe zakho ngokungeza usuku nesikhathi isitembu ukuwenza ubukeke uyiqiniso ngokwengeziwe! Ungathatha izithombe bese uzigcina kuhlelo lokusebenza ngqo, okwenza kube lula kakhulu ukuzisebenzisa. Zama uhlelo lokusebenza uma ufuna ukuzama ukubukeka kwezithombe zakho bese uziguqula zibe “ezilahlayo” ngaphandle kokulinda!
I-LucidPix ingenye yohlelo lokusebenza lwesithombe olunomusa oluguqula isithombe lube yi-3D usebenzisa i-AI ethuthukisiwe eyakhelwe kuyo. Ungakhetha ukuthuthukisa izithombe ezahlukahlukene ngokwesibonelo inja yakho, isithombe esingaqondakali, noma ngisho ne-selfie! Kungakhathalekile ngendaba, ungathwebula futhi udale ukujula okukhulu ukuze wenze izithombe zakho ziphile. Uhlelo lokusebenza linezici eziningi, kufaka phakathi ozimele nezihlungi ukusiza ukwenza ngezifiso isithombe sakho! Yabelana kalula ekudalweni kwakho ku-Facebook noma ku-Instagram ngokuthepha kwenkinobho. Lolu hlelo lokusebenza oluhlukile luqinisekile ukwenza izithombe zakho zibonakale!
Ukuze uthole umhlahlandlela wesinyathelo ngesinyathelo sendlela yokusebenzisa uLucidPix, chofoza lapha!
Lolu hlelo lokusebenza lwakha izithombe ze-wigglegraph umsebenzisi angazenza ngezifiso zokuhlunga eziningi. I-FILM3D ulungele i-Instagram uma ufuna ukuzama okuthile okusha bese unethemba lokuthambekela. Kufanele kwaziwe ukuthi isithombe asiphumi esikrinini ngokuqhathaniswa neLucidPix kodwa-ke sinikeza umphumela ocashile we-3D. Lapho uvula uhlelo lokusebenza, ngokushesha lubekwa kumodi yokubamba futhi kulula ukuyisebenzisa ngokuthepha okukodwa kwenkinobho!
Ikhamera + Ifa
Lolu hlelo lokusebenza luhle kulabo abafuna ukuthuthukisa noma ukuthuthukisa ikhwalithi yezithombe zabo. Ikhamera + Ifa inikeza izinketho eziningi ongazikhetha ezinjengeDijithali Zoom, I-Horizon Level, Clarity njll. Lokhu kusebenza ndawonye ukukusiza ukudala isithombe esihle kakhulu! Uhlelo lokusebenza luyinkimbinkimbi ngokwengeziwe ukusebenzisa uma kuqhathaniswa nabanye kodwa, ngemuva kwesibili noma okwesithathu usebenzisa uhlelo lokusebenza, uthola i-hang it!
"Isihlungi se-Clarity yisithombe esiyimfihlo sokuthatha izithombe se-iPhone-singeza ubuhlakani bekhamera cishe kunoma yikuphi ukudutshulwa." - UKevin Sintumuang, The Wall Street Journal
Ngabe uyavumelana nohlu lwethu? Sazise ukuthi ngabe kukhona ezinye izinhlelo zokusebenza ezinhle kakhulu zokuthatha izithombe zeselula ozisebenzisayo!
Ufuna ezinye izithombe zesampula? Ngabe udinga amanye amakhasi we-Facebook ukulandela? Hlola Izithombe ezinhle kakhulu ze-LucidPix 3D futhi Izithombe zeLucidPix ze-3D ku-Facebook! Ungase futhi ungene kwi-Instagram yethu @LucidPix ukubona ukuthi sikwenze kanjani!
Ungasibhala Kanjani isithombe se-3D →← Ungazakha Kanjani Izithombe Ezimnandi Zokudla ze-3D nge-LucidPix